Shot phantsi igqwetha likaPhilippe Schol kunye nokuphanga ubuxoki uSchiphol: UMartin Vrijland
Iya kutolikwa kude kuninzi kwaye kuvakale ngokungathi akukho nto ingako xa ndibona ukuba igama elithi uPhilippe Schol linekhonkco elingaphantsi kunye neSchiphol. Jonga igama likaPhilippe Schol. Ngaphantsi kukho igama elithi Schiphol. I-Neuro Linguistic Programming okanye i-subliminal programmes yinto eyenzekayo ngokungazi kwengqondo yakho. Ezi ziindlela ze "hypnosis technology" esele zisetyenziswa kumajelo osasazo iminyaka. Ewe kuyothusa ukuba elinye igqwetha lidutyulwe, kodwa ukubulawa kukaDerk Wiersum kwakufana kakhulu nePsyOO (ukusebenza kwengqondo) kwaye apha nathi asazi ukuba akusayi kuphinda kube njalo. Isiteyitimenti sokuba uPhilippe Schol uphume emngciphekweni esibhedlela asibeki ecaleni ukubakho kwe-PsyOp. Kuzo zonke iimeko kunokwenzeka ukuba usebenze nabantu abahlelelekileyo kwi-PsyOp kunye / okanye usebenze ngezinto ezinzulu. Isisk sokuqeshwa kwesaziso ngoku ukuba inhlabamkhosi yobuxoki.
Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba iiPsyOps zinokubekwa njani ndawonye ngokunzulu kunye / okanye ngabantu abonakalisiweyo, kodwa ngaphezulu kwayo yonke le mihla akukabikho inyanga ilindelwe ukuba inyanzelwe ngamanyathelo amatsha okanye umthetho. Ukudala ingxaki yempembelelo enkulu kwezentlalo, ngeenjongo ze imeko yamapolisa engaphezulu (imali eninzi emapoliseni, ubulungisa kunye / okanye nomkhosi kunye nemithetho yamapolisa engaphezulu), yindlela umdlalo wePsychological Operations esebenza ngayo. Ungayisebenzisa kanjani i-PsyOp kwezobuchwephesha, imovie Wag inja evela kwi-1997 sele iphakamisile kuhlobo olucekeceke, kodwa asinakukhupha oko kuba yinto yemihla ngemihla yemithombo yeendaba kunye neendlela zanamhlanje ziqhubele phambili ngakumbi kunangaphambili . Ndicacisile oku kumanqaku aliqela:
Kucetyiswa ukuba uwafunde ngokucokisekileyo la manqaku. Kukwam incwadi entsha Ndixoxa ngesihloko kwakhona kwaye ndixoxa ngomfanekiso opheleleyo wokuba idlalwa kanjani. Kwimeko yokubulawa kukaDerk Wiersum (enokwenzeka PsyOp), kwakungekho thuba lide ngaphambi kokuba umphathiswa uFerdinant Grapperhaus abambelele ngokuqinileyo embizeni yerhafu ukuba agcinele urhulumente imali engaphezulu. Inani elincinci le 110 izigidi hayi ngaphantsi! Ewe ucinga ukuba kulungile, kuba iyimfuneko ngalo lonke ulwaphulo mthetho:
Emva kwayo yonke loo nto, sasine (PsyOp?) Ukuhlasela kuyo Isakhiwo sePanorama, (PsyOp?) uhlaselo kwi Isakhiwo seTelegraaf kwaye saba nokupheliswa kuyo (PsyOp?) Inkqubo yeMarengo Ngokucacileyo sisikrelemnqa (esenziwe-wena?) Isixhobo se-Mocro Mafia entloko (enzulu?) Ridouan Taghi. Asazi. Onke amabali eendaba. Iziswa kuthi ngamajelo eendaba kwaye siyayikholelwa. Kwaye ukuba enye imithombo yeendaba ithe cwaka, mayibe yinyani. "Ewe unaye uMartin Vrijland ongakholelwa konke konke kwinto esiyibona kumajelo osasazo, kodwa hey ayikho emgceni!"Okanye ngaba iyahambelana nale nto kwaye ngaba sidlalwa ngenene kwinqanaba lemveliso ye studio kaJohn de Mol? Ewe, uJohn de Mol ungumnini wamanenekazi kunye nabanumzana baseAlgemeen Nederlands Persbureau.
Kwimeko yeendlela ezingaphantsi zemithombo yeendaba, kukwaluncedo olongezelelekileyo ukubonisa iindlela esele zikhankanyiweyo ze-NLP. Yindlela ngqo, efihlakeleyo, engenakuqhathaniswa yenkqubo yokusebenza ngokusebenza ngakumbi kunokubhengezwa kohlelo ngolawulo lokuqonda, olusetyenziswa ebantwini mihla le. Inkqubo enjalo efihlakeleyo yenzeka ngeendlela zobuchule ezaziwa kuphela kwiqela elikhethiweyo labantu abafundele ubuchwephesha bengqondo, ukuqhuba ngengqondo okanye ukuthengisa. Sisoloko sithetha ngesihloko senqaku, iifoto okanye imifanekiso eshukumayo okanye ukwakhiwa kwebali elenziwa ngale nkqubo isemxholweni. Imijikelezo ejikelezayo kunye ne-backreader yeendaba kwiindaba ze-NOS ziyimizekelo yeendlela ezicekeceke zeendlela zehipnosis. Ngelixa sinokucinga ukuba kuphela ngabavumisi abanjengoVictor Mids basebenzisa olu hlobo lwento, asihoyi kuqheliselo lwemihla ngemihla lweendlela ezinjalo ezindabeni. Kwaye nokuba sele sifundile ukuba ezobuchwephesha ziyasetyenziswa, siyaqhubeka nokufunda iphephandaba okanye sibukele iindaba, kuba sikholelwa ukuba singakwazi ukugqitha kuyo okanye sifuna nje 'ukuqhubeka sikhumbula okwenzekayo'.
Ividiyo engezantsi ibonisa indlela ubuchwephesha be-subliminal obunempembelelo enkulu kwi-subconscious yakho kunokuba ucinga ukuba kunokwenzeka. Ingxelo yokuqhekezwa e-Schiphol isenokubonakala ngathi inomsindo ongeyonyani, kodwa inokuba inento yonke yokwenza nohlobo lwenkqubo yokuthibela kwi-anchor elinye ibali leendaba namhlanje kwingqondo yakho: UPhilippe Schol. Kufuneka usoloko uziswa kwaye ugcinwe ngendlela yokwamkelwa, ukuze wamkele yonke loo mithetho mitsha: imali ethe kratya kurhulumente wamapolisa kunye nemithetho yamapolisa engaphezulu.
Qaphela ukuba kunokwenzeka ukuba uza kudlalwa ngomdlalo omkhulu phakathi kukarhulumente kunye nabezindaba kunye nolunye uhlobo losasazo!
Kwividiyo, khetha 'imibhalo engezantsi' kwaye ukhethe 'uguqulo oluzenzekelayo' kunye no-'Dutch 'kumagama asemazantsi esiDatshi
Uludwe lwekhonkco lovimba: wikipedia.org, isigama.nl, rtlnieuws.nl
I-Adobe, i-Twitter kunye namajelo eendaba aphambili aza kulwa neenkcukacha ezinzulu?
Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Eyona nto siyibona ilungele ukuhanjiswa!
Siqhubeka sithatha i-Trumanshow yezopolitiko kunye nabezindaba ngokubaluleka
tags: advocaat, nzulu, deepfakes, I-Derk, I-Derk Wiresum, eziziimbalasane, dubula, ukuxhwila, ingxelo yokuqotywa, eendaba, isaziso, nkonzweni, sebenza, UPhilippe Schol, yengqondo, psyop, Schiphol, I-Wiresum
7 Novemba 2019 kwi-00: 25
Kuphinde kube luhle ukubiza i-idd, i-alamu yokuqasha kunye nentatheli ye-parool ikhwaza isiya kwiholo yokunduluka |:
"Ungandixelela ukuba yintoni ephosakeleyo, maam?" Jonga ukunxibelelana okubhaliweyo, ewe ewe ewe Parool, Telegraaf, NRC ayinamsebenzi kwakhona
CUT & Cola kwaye ngosuku olulandelayo uPawwtje unesinye isihloko (esibe kwishelufa ixesha elide).
Yintoni ekhuthaza aba bantu baziboleka kwimisebenzi esele ibekwe yindawo enjalo, ukwenza abo bangakwaziyo ukulala kakuhle balale ubusuku ufuna umkhosi wama-psychlogen, iya icaca ngakumbi
7 Novemba 2019 kwi-00: 36
7 Novemba 2019 kwi-01: 20
Yintoni ephuma kwi-MSM njengesiganeko kunokuba yinto nje yokuzivocavoca yabalindi abaphezulu. Jonga ukuba zonke iinkqubo ziyasebenza kwaye uvavanye ukuba iigusha ezigulayo zenza njani ... emva kwayo yonke into, ukulinganisa kukwazi
7 Novemba 2019 kwi-10: 33
Kuyinyani, nangona benamandla kunye nemali, bahlala besoyika kwaye bengazithembi kubantu abaqhelekileyo. Awusoze wazi. Zizinto ezinamandla kunye nemali ngaphandle kwesazisi sokwenene kunye nengqibelelo. Ayithengiswa.
7 Novemba 2019 kwi-10: 38
Ungalibali ukuba kukho uloyiko kunye nokungaqiniseki kuba abanakukwazi kwaye abafuni kuchonga nabantu abaqhelekileyo kuba bengabaphambukeli, abantu abaphakamileyo abaphetheyo amaqhosha. Uloyiko lokuphulukana neekhiphedi ngokungalindelekanga ngamalungelo ahambelana nazo, imali njl.
8 Novemba 2019 kwi-19: 25
Ewe kulungile, amanenekazi kunye namanenekazi esikripti bazimisele ukubambelela kokuncinci okanye ubuncinci kumanqanaba abawacwangcisileyo. Zonke izandi eziphambukayo zijongwa kakuhle ngabarhanelwa abaqhelekileyo. Akuzange kubenako ukwahluka eMadurodam, apho iigadi kunye neeheji zigcinwe khona, iideski zinemilinganiselo .. konke kujongeka kuyinyani, kungamanani kwaye kuyinyumba .. ungade ufune ukuhlala apho 😀
« I-Adobe, i-Twitter kunye namajelo eendaba aphambili aza kulwa neenkcukacha ezinzulu?
Yintoni kanye le ngxaki yeNitrogen, kutheni amafama ekhalaza kwaye kutheni kuncitshiswa isantya? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.030.508
UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi
UMartin Vrijland op UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi
SandinG op UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi
Joyina amanye ama-1.685 ababhalisile